Jabuuti oo Eritrea ku eedeysay iney kusoo deysay calooshood u shaqeystayaal – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jabuuti oo Eritrea ku eedeysay iney kusoo deysay calooshood u shaqeystayaal
A warsame 4 May 2015 4 May 2015
Mareeg.com: Dowladda Jabuuti ayaa ku eedeysay dalka deriska la ah ee Eritrea inuu adeegsanayo calooshood u shaqeystayaal qalqal gelinaya amaanka Jabuuti.
Sida uu qoray Warsidaha World Bulletin, Wasiirka Arrimaha Gudaha Jabuuti, Hassan Omar Mohamed ayaa sheegay in kooxo calooshood u shaqeystayaal ah oo u adeega dowladda Eritrea ay woqooyiga Jabuuti ku qalqali geliyaan dadka shacabka ah.
Wasiirka ayaa sheegay in kooxahani dadka reer Jabuuti ee ku nool xadka labada dal ay ka boobaan raashinka, dawada iyo kaalmada mararka ay helaan.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Jabuuti, Hassan Omar Mohamed ayaa sidoo kale ku eedeeyay kooxahaas hubeysan iney xoog ku afduubtaan dadka reer Miyiga ah ee Jabuuti, ulana gudbaan dhanka Eritrea.
Hassan Omar Mohamed ayaa sheegay in dowladda Jabuuti aysan aqbali doonin kharbudaadda kooxaha calooshood u shaqeystayaasha ka sameeyaan woqooyiga Jabuuti.
Madaxweynaha Puntland oo Nairobi kula kulmay wasiirka arrimaha debadda Kenya
Dowladda Soomaaliya iyo Alshabaab oo isu bixiyey hal magac oo aan isku micno aheyn